रियालिटी शोमा जम्दै रोल्पाली युवा : लोकस्टारपछि कमेडी च्याम्पियनमा – Jaljala Online
कमेडी च्यात्पियनको उत्कृष्ट ४ प्रतिस्पर्धी पुन जनयुद्धमा सबैभन्दा मानवीय क्षति व्यहोरेको जेलबाङका हुन् । राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी उनको गाउँ जेलबाङका ७३ जना मानिस विभिन्न ठाउँमा मारिएका थिए ।
काठमाडौं छिरेपछि उनले राष्ट्रिय नाचघरमा ६ महिना अभिनय र ६ महिना नृत्य सिके । त्यसपछि उनले विहान स्कूलमा नृत्य सिकाउन थाले र राती दोहोरी साँझमा काम गर्न थाले । ‘स्कूलमा म कल्चरल म्यूजिक सिकाउँछु, मैले ६÷७ वटा प्राइभेट स्कूलमा सिकाएँ’ उनले भने, ‘साँझमा दोहोरी साँझमा काम गर्छु ।’ उनले पछिल्लो समय स्कूलमा म्यूजिक सिकाउन छाडेको बताए ।
आरुबोटे नरसंहार: ९ जनाको हत्यामा कसरी जोडियो वैदेशिक रोजगार ? रहस्यमयी
जेठ २५, आरुबोटे (पाँचथर) । गत जेठ ६ गते पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-३, आरुबोटेमा नृशंस हत्याकाण्ड भयो। स्थानीय बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्मा (ससुरा-ज्वाइँ) का परिवारका ९ जनाको एकैरात भएको हत्या घटनाले विभिन्न शंकाहरु पैदा गरेको छ। यो खबर नारायण अधिकारी/लिलु डुम्रेले नेपाललाइभमा लेखेका छन् । घटना उत्पन्न गराउन सक्ने कारक केके थिए? प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै […]